Inqubomgomo Yobumfihlo - The Kdom
Uma ngemuva kokungena ngemvume, uguqula ingqondo yakho, ungahoxisa imvume yakho yokuxhumana nawe, ukuthola iqoqo eliqhubekayo, ukusetshenziswa noma ukudalulwa kwemininingwane yakho, nganoma yisiphi isikhathi, ngokuxhumana nathi ku-support@thekdom.com
Ukuze uthole ukuqonda okungaphezulu, ungase ufune nokufunda Imigomo Yesevisi ye-Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) noma Isitatimende Somfihlo (https://www.shopify.com/legal/privacy).
Ngokuyinhloko, khumbula ukuthi abahlinzeki abathile bangase babe khona noma babe nezindawo ezitholakala ezikhundleni ezihlukile kunakho noma thina. Ngakho-ke uma ukhetha ukuqhubeka nokuthengiswa okubandakanya izinsizakalo zomhlinzeki wenkampani yangaphandle, imininingwane yakho ingase ibe ngaphansi kwemithetho yegunya (s) lapho lowo mhlinzeki wesevisi noma izakhiwo zayo zitholakala khona.
Uma usinikeza ngolwazi lwekhadi lakho lesikweletu, ulwazi lubethelwe ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokubheka obusondelene (SSL) futhi bugcinwe ngokubethela kwe-AES-256. Nakuba kungekho ndlela yokudlulisela phezu kwe-intanethi noma isitoreji se-elekthronikhi i-100% ivikelekile, silandela zonke izidingo ze-PCI-DSS futhi sisebenzisa amanye amazinga embonini evunyelwe ngokuvamile.
INGXENYE 7 - COOKIES
Nasi uhlu lwamakhukhi esiwasebenzisayo. Sibhale ohlwini lapha ukuze ukwazi ukukhetha uma ufuna ukuphuma kwamakhukhi noma cha.
INGXENYE 8 - IMINYAKA YOKUGCINA
ISIQEPHU 9 - IZINTSHINTSHO KOMTHETHO WOMTHETHO
Uma ungathanda: ukufinyelela, ukulungisa, ukuchibiyela noma ukucisha noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu esinalo ngawe, ukubhalisa isikhalazo, noma uvele ufuna imininingwane engaphezulu thinta Isikhulu Sokuvumelana Ngobumfihlo ku-support@thekdom.com